Ezemidlalo kunye nokuPhila | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: NeMidlalo kunye nokuPhepha
Ubukhulu bemivalo: Ngaba ichaphazela uqeqesho?
Ubungakanani bemivalo budlala indima ebaluleke kakhulu ngexesha loqeqesho kunye noluhlobo lwezixhobo. Kukho amagama amaninzi aqhelekileyo ahambelana nawo. Kodwa ubukhulu becala i-projectile ibizwa ngokuba yi "parallel bar" okanye ...
Imoto yesikhephe "iMercury": iimpawu kunye nokuphononongwa. Uluhlu lweemoto zangaphandle zeMercury
Inkampani yaseJapan "iMercury" igxile kakhulu ekwenziweni kweemoto ezingaphandle zamandla ahlukeneyo. Phakathi kweemveliso zale nkampani, umsebenzisi uyakwazi ukufumana zombini uhlaselo kunye stroke ezine. Ukuba uyakholwa ncomo zabanini, lo mcinga ...
Izixhobo zezemidlalo kwi-pre-school, esikolweni, kwisitalato: GOST. Ngubani obandakanyekayo kwizixhobo zomhlaba wezemidlalo?
Indawo yokudlala, eyilelwe imidlalo yangaphandle, inceda ukugcina kunye nokwenza ngcono imeko yesizwe. Kule mihla, indawo yokudlala yindawo apho abantwana kunye nabantu abadala basebenzisa iintlobo ...
Ukuloba eBelgorod - ezona ndawo zibalaseleyo
Umkhondo uqokelelwe, iintshulube zigciniwe, imeko iyalwa, kwaye nemozulu iyasebeza. Ungayibetha indlela. Kuhleli kuphela ukuthatha isigqibo sokuba uyokuloba phi eBelgorod nakummandla wale dolophu intle kangaka ...
PSO -1. Ubungakanani bePSO sniper - 1. Sniper optics
Ukubona okubonakalayo yinxalenye ye-sniper. Esi sixhobo sibaluleke kakhulu ngokudubula okulula, okukhawulezayo nokuchanekileyo. Kukuvumela kuphela ukuba ufikelele kwithagethi kumgama okude kakhulu. Ngenxa yobukho besithuba kunye nokwanda koku ...
Eminye inyathelo yokuhamba. I-Technique enye indlela ye-ski-ski
Ukutshintshwa kwamanyathelo amabini (imifanekiso ebonisa ukuba iya kuboniswa ngezantsi) ithathwa njengeyona ndlela iphambili yokuskiya kwiindawo ezahlukeneyo kunye neemeko zokutyibilika. Kusebenza kakhulu kubumnene (ukuya kuthi ga kwi-2 °) kunye ...
Kutheni i-CSKA ibizwa ngokuba "ngamahashe", kunye nabalandeli bayo- "amahashe"?
Uninzi lwabalandeli bebhola ekhatywayo banomdla kulo mbuzo: kutheni i-CSKA ibizwa ngokuba "ngamahashe", kwaye abalandeli bayo- "amahashe"? Kwaye, ngoba? Impendulo yalo mbuzo uza kuyifumana kweli nqaku. Uhambo lwembali kutheni i-CSKA ibizwa ...
AmaDamask kunye namajelo eDamask
Itekhnoloji yokwenza iimela ezinganyangekiyo zazikho kumawaka eminyaka eyadlulayo. Kubonakala ngathi kwinqanaba lobuchwephesha langoku, umntu unokulibala ngeendlela zakudala zokwenza iincakuba kwaye atshintshele kwiindlela zokupheka eziphambili zokuzenza. ...
Ukuya kuloba eLwandle oluMhlophe. Indawo zeentlanzi
Ulwandle Olumhlophe, oluyindawo enkulu yoLwandlekazi iArctic, luyabanda ngokwaneleyo. Nangona kunjalo, iindawo zasebusika kunye nolwandle, kunye nendalo emangalisayo yetaiga, zitsala abaninzi. Abantu beza apha ngasese kwingxolo ...
"IChertanovo" sisikolo sebhola sabantwana. Ukuphononongwa kwesikolo sebhola
"IChertanovo" sisikolo sebhola esenziwe kwiminyaka yakutshanje yaba lelinye lamaziko aphambili eMoscow nakwisithili sonke esiphakathi. Ngenkxaso yoRhulumente waseMoscow ngasemva kwabo, iinkokheli zeli ziko zikwazile uku ...
"Bodyflex": uphononongo, ngaphambi nasemva kweefoto. Ukuzivocavoca ukuphefumla ukunciphisa umzimba
I-Bodyflex yinkqubo eyahlukileyo ekuvumela ukuba ulahlekelwe ngokuthembekileyo ziiponti ezongezelelweyo. Le seti yokuzivocavoca ukunciphisa umzimba yaqulunqwa ngabantwana bakwaGreer. Ngokutsho kwakhe, iziphumo ziyaqapheleka emva kweeveki ezimbini zeklasi. Kaninzi…
Ngaba ndingakwazi ukusela amanzi emva kokusebenza kunye nokuba buninzi?
Wonke umntu uyazi malunga neempawu eziluncedo zamanzi emzimbeni. Ibalekisa imetabolism, igcwalisa isisu esingenanto, inika imvakalelo yokugcwala ixesha elifutshane. Amanzi asetyenziswa ngokubonakalayo ziimbaleki kuyo yonke imidlalo ...
Indlela yokufumana ubunzima kumntu oncinci: inkqubo yoqeqesho. Indlela yokufumana ubunzima bomzimba obubuthakathaka
Ungasithoba njani isihlobo somntu obhityileyo? Rhoqo lo mbuzo ubuzwa ngabaninzi abanezinto ezithile malunga nenkangeleko yabo. Unokuphunyezwa njani lo mnqweno? Funda malunga nemiba ebalulekileyo ...
Iflegi yeOlimpiki - ifuzisela ntoni?
Ukuqala kweMidlalo yeOlimpiki kwabekwa kumazantsi eGrisi kwisixeko saseOlimpia. Inkqubo yokuqala yomdlalo ibandakanya ukuqhuba inqanaba elinye. Ngapha koko, le nkqubo yaqala ukongezwa ngeentlobo ezintsha zokhuphiswano: ukuqhuba ...
Ukuloba kwiplastiki ye-foam: iimpawu zokuloba, ukusetyenziswa kwezixhobo, iimfihlelo kunye neengcebiso
Kungekudala, uhlobo olutsha lokuloba lwaziwa, apho umlomo we-foam. Okwangoku, kusekho abanye ababambisi be-amateur abangazi nto ngale ndlela inomdla yokuloba. It…
Umdlalo weTwister: imigaqo
Yintoni onokuyenza kwinkampani enobuntu kwindalo, xa i-barbeque ingekakulungeli okwangoku, bekungekho rockets yaneleyo kuye wonke umntu, kwaye kukho amandla angaphezulu kwaye anqwenela ukuzibonisa kwaye uhlekise nabanye? Lixesha lokuba ...
I-bicycle carrier: inketho kunye nenkcazelo
Abahlali beedolophu ezinkulu baya bekhetha ukuthuthwa kwendalo kunye nokuphila okunempilo njengebhayisekile. Nangona kunjalo, eyona ngxaki kule meko inokufumana indawo yokugcina efanelekileyo yentsimbi ...
UVictoria Uthabatha ukutya: amamenyu, iingcebiso kunye neziphumo
Ngaba uyazi ukuba iVictoria Romanets yehlise ubunzima bomzimba? Uyayazi indlela awayekutya ngayo? Ukuba akunjalo, sicebisa ukuba ulifunde eli nqaku. Siyathemba ukuba ulwazi oluqulethweyo luya kukunceda kwi ...
Intloko (i-alpine skiing): inkcazo nokuhlaziywa
Inani labalandeli be-skiing ze-alpine likhula minyaka le kwilizwe lethu. Iindawo zokulala ezintsha ezixhotyiswe kakuhle zivela eRashiya, apho ungakhwela khona kwiitraki ezilungileyo kwaye ube nexesha elimnandi. Nge…
Iikhocktails zokulahleka kwesisindo: ukuphononongwa kunye neereyiphi. Uluhlu lweenkcazo eziphumelelayo
Ngelixa bambalwa abantu abathembela iipilisi zokutya, ukutya okunempilo, ngokuchaseneyo, bafumana amaqabane amatsha minyaka le. Ewe kunjalo, ukunciphisa umzimba akufuneki kube yinto ekhethekileyo, kulungelelanise kancinci ...
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,487.